Xaalada amniga ee caasimada dalka itoobiya ee Addis Ababa oo kasii daraysa. – Xeernews24
Xaalada amniga ee caasimada dalka itoobiya ee Addis Ababa oo kasii daraysa.
7. März 2019 /in Guud Ahaan /von admin
Warbaahinta FBC oo makarafoonka la dhexmartay bulshada rayidka ah ee kunool xaafadaha kaladuduwan ee Addis Ababa ayay bulshadu usheegtay inay aad uga walaacsanyihiin amniga lafahooda/naftooda iyo maalkooda maadaama ay baryahan dambe aad usoo bateen kooxo budhcad ah oo abaabulan kuwaasoo habeenkii si badheedh ah oon gabasho lahayn guryaha ugu soodhacay wixii yaalana gurta.
Shacabka ayaa sidookale cadeeyay inayna habayaraatee wax kalsooni ah kuqabin ciidanka booliska bulshada kuna eedeeyeen inayna marnaba kuusoo birmanaynin iyagoo qayladaada maqla.
Koomishneer kuxigeenka koomishinka booliska MM Addis Ababa mudane Xassan Nagaash ooy warbaahinta FBC wax kawaydiisay cabashadaas bulshada ayaa sheegay inay jiraan tuug kooxa-kooxa ah oo habeenkii dadka dhacan.
Masuulka ayaa sheegay inay hawlgal ciidan ooy muddo 15 maalmood ah wadeen gacanta kusoo dhigeen xubno ka kala tirsanaa 8 kooxood ooy kooxiba xaafado gaar ah ka hawlgalaan (kooxaha 1, 2, 3, 4, & 5: kooxaha dhaca guryaha iyo kambaniyada ajnabiga ah sida; China, Hindida IWM), halka kooxaha: 6, 7 & 8 ay dhacaan hay’adaha dawliga ah iyo huteelada.
Mudane Xassan ayaa sidoo kale cadeeyay inay kooxahaas budhcada ah ku qabteen hub (8 bastooladood), 4 baabuur oo ay u adeegsanayeen dhaca, kiisaskoodiina kasocdaan maxkamada.
Ma’aha markii ugu horaysay ee ay shacabka maamulka magaalada addis ababa ka cawdaan dhibaatada ay ku hayaan tuugta hubaysan ee habeenkii guryaha ugu soo dhacda, kadibna wixii guriga alaab taala oodhan daldasha oo haday iskudayaan inay isdifaacaan ama qaylyaan ay tuugtu lafohooda udilaan.
Tuugtaas casriga ah ayaan ku ekayn addis ababa oo kaliya, laakiin ay jiraan qaar hawlgal kutaga meelo kamida deegaanada dalka iyagoo aad u labisan baabuur casriyana wata sidaasna meheradaha waawayn gaar ahaan kuwa iibiya qalabka electronics ka ah sidii kadhacday magaalada Qabribayax muddo yar kahor.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/03/adis.jpg 920 712 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-03-07 18:24:052019-03-07 18:24:05Xaalada amniga ee caasimada dalka itoobiya ee Addis Ababa oo kasii daraysa.
FAALLO: Martiqaadka Geelle Ee Xisbiga Kulmiye? Daawo Gaadhi Booyad ah oo Ugaas Mustafe ugu deeqay shacabka reer Garba-ciis...